अनुहारमा किन आउँछ कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना ? यसरी हटाउनुहोस् - Nepali in Australia
August 4, 2021 autherLeaveaComment on अनुहारमा किन आउँछ कनिका जस्तो सेतो, पहेंलो रङको दाना ? यसरी हटाउनुहोस्
काठमाडौँ । अनुहारमा कनिका जस्तो देखिने सेतो, पहेंलो रङको कडा बल जस्तो दानालाई मिलिया भनिन्छ।मिलिया मुख्यगरी अनुहार, नाक, गाला तथा आँखाको तल्लो भागमा आउँछ। मिलिया सामान्यतयः साना आकारमा देखिने गर्छन्। तर, यसको आकार दुई मिलिमिटर सम्मको हुनसक्छ।
मिलिया सबै उमेर समूहको मानिसको अनुहारमा देखिए पनि भर्खर जन्मिएको बच्चामा धेरै देखिन्छ। मिलियाले छालामा कुनै पनि समस्या पार्दैन। मिलिया केही हप्तादेखि महिनासम्म रहने हुनाले उपचार आवश्यक पर्दैन।मिलिया प्रइमेरी र सेकेन्डरी गरी दुई प्रकारको हुन्छ।